Maraoka: Ny Tena Zava-misy Amin’ny Fivarotan-tena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Jona 2017 8:59 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Español, Ελληνικά, English
Malaza fa manana taha ambony amin'ny fivarotan-tena i Maraoka. Na dia tsy ambony tahaka ny hitan'ny maro ao amin'ny firenena Helodrano aza izany- sy izy miavaka fa nampahantraina sy be mpizaha-tany – dia toerana ho an'ireo tovovavy marobe mitady “lalan-kivoahana” i Maraoka. Raha misy ireo mandeha any ivelany mba hianatra na hiasa, ny sasany kosa mivaro-tena. Maro ireo miasa ao amin'ny tanàna kely any Maraoka ary miaraka amin'ireo namana Maraokana ihany ny ankamaroany, ny hafa kosa lasa ao anatin'ny indostrian'ny fizahantany ara-nofo mampalahelo sy goavana ao Maraoka, izay maro amin'ireo tranga no natolotra eny amin'ny fitsarana isan-taona. Ny hafa indray mitodika any amin'ny firenena Helodrano Manankarena mba hiasa; misy ireo lasa mpanao volo na mpampiala voly, saingy ny hafa kosa lasa mpivaro-tena an-tsitrapo na zavatra hafa.
Tranga iray ao Maraoka ny momba ny mpianatra mpivaro-tena. Bilaogera Words For Change namoaka lahatsoratra mahaliana momba ny tovovavy ambanivohitra ao Maraoka, tonga tao an-tanàna lehibe mba hianatra eny amin'ny oniversite, ary niafara tamin'ny fivarotan-tena. Sombin-dahatsoratra:
Ao amin'ny efitra fatorian'ny vehivavy, nianatra ny fomba fiakanjoana, fanatsarana tarehy, sy miresaka tahaka ny vehivavy i Aïcha. Tao amin'ny efitra fatorian'ny vehivavy ihany koa no nanandrana mba hanana vola am-paosy hividianana akanjo mahafinaritra azy sy mahatonga azy tahaka ny tovovavy an-tanàn-dehibe izy. Ny dingana voalohany tamin'izany dia ny fiarahana mangina tamin'ny lahy antitra izay nanasa azy tany amin'ny hotely, ary nampiseho azy ny fahatsarany sy ny maha vehivavy azy. Ny tena manindrona dia raha nahita izy fa tsy maintsy mivaro-tena mba handoavana ny faktiora hanatanterahana ny haitrahaitran-jatovony.
Raha vao nahazo diplaoma i Aïcha, dia sarotra taminy ny hiala amin'ny fiainana alina tsara karama ka hiova asa birao fadiranovana na hiala ny jiron'ny tanàn-dehibe hifindra trano kely ao Lhajeb. Nilaza tamiko niaraka tamin'ny feo mangidy izy hoe “Raha nianatra aho, dia ny mba hanambola. Rehefa lasa asako tanteraka izany vao fantatro fa mpivarotena aho, taorian'ny fahazoana diplaoma”. Mbola monina ao an-tanàndehibe i Aïcha ary miasa ho mpivaro-tena handefasana vola ho an'ny fianakaviany sy handoavana ny fandaniany. Mahatonga ireo lehilahy manan-karena sy malaza manerantany handoa ny fandaniany ny fianarany sy ny hatsara-tarehiny.
Lahatsoratra hafa vao haingana, avy amin'i Thejoker, kosa milaza hoe tahaka ny ahoana ny fivarotan-tena ao Maraoka :
Raha ny marina, misy ireo mpivarotena, teny tsotra avy aminao dia hamirapiratra azy ireo sy hampiditra azy ireo ho azy amin'ny resadresaka. Ny tena mampalahelo dia maro amin'ireo tovovavy ireo no mianatra, manana fianakaviana mahantra ary manao ny asa fivarotan-tena noho ny tsy fananam-bola betsaka. Nahita tovovavy, tena tanora aho indray andro, izay hitako fa virijiny, natahotra izy raha misy olona manatona azy ary nony farany, nisy olona niresaka taminy, saingy mbola natahotra tanteraka izy. Mampalahelo tanteraka ny zavatra hitanay eny an-dalan'i Casablanca. Nilaza ny sasany tamin'ireo Maraokana fa raha tsy manao tchadour [voaly] ny tovovavy, afaka mahazo antoka ianao fa mpivarotena izy. Tsy tahaka ny ao Eoropa izay ankatoavin'ny lalàna ny mpivarotena. Ao Maraoka, mifangaro tanteraka izany ka sarotra ho anay ny mahafantatra hoe iza no tovovavy mpivarotena ary iza no tsy mpivarotena. Heveriko fa misy ireo tovovavy sasany manao jeans sy fitafy tandrefana ary tsy mpivarotena, tsy maintsy mikaroka ny tsirairay alohan'ny ahitana ny tena fitiavana.